Gudoomiye Iminka Oo Iminka Fariin Hanjabaad U Muuqata Diray ..” Kominshinku Waajibkiisii Wuu Gabey… | Berberatoday.com
Gudoomiye Iminka Oo Iminka Fariin Hanjabaad U Muuqata Diray ..” Kominshinku Waajibkiisii Wuu Gabey…
April 27, 2018 - Written by berberatoday berberatoday
Hargaysa (Berberatoday.com)_ Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah
ee Waddani Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa ka hadlay muran ka taaggan jagada golaha wakiillada ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Ibraahin Kacaan oo dhawaan geeriyooday.
Waxa uu Dr Cirro layaab ku tilmaamay in guddida doorashooyinku Maxkamadda sare gayso magacyada Xuseen Axmed Caydiid, Maxamed Muuse Abees iyo Marxuum Ibraahin Kacaan kana dalbadaan in maxkamaddu caddayso cidda kursiga xaq u leh.
Dr Cirro wuxuu sheegay in guddida doorashadu ka leexanayso nidaamka sharci ee ay tahay in loo soo buuxiyo jagada ka bannaanaata golaha iyada oo horena kuraas badan oo bannaanaatay la soo buuxiyay. Waxa uu la yaab ku tilmaamay in xogtii Komishanku hayay ay waydiistaan maxkamaddu in ay kala caddayso maaddaama xogta maxkamadda taalla tahay tii Komishanku u gudbiyay.
Waxa uu ka digay in wax faro gelin ah lagu sameeyo arrinta waxaanu sheegay in uu jiro tuhun ah in xukumaddu aanay jeclayn in Xuseen Axmed Caydiid soo galo golaha, sidaas awgeedna ay muranka u abuurayso waxaanu ku baaqay in si caddaalad ah loo siiyo cidda kursigaasi xaqa u leh.